09-11-2012 01:32 AM #1
'Dae&muae owif;awG qufNyD; wifay;MuygpdkU...
Originally Posted by vessel65
နိုဝင်ဘာ လောက်မှာရန်ကုန်ပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားလို့ အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ဈေး ဘယ်လောက်များရှိသလဲလို့ သိချင်လို့ပါခင်ဗျ။ Silk Air/MAI
ပြီးတော့ အွန်လိုင်းက ၀ယ်တာနဲ့ အပြင်မှာဝယ်တာ ဘယ်ဟာက သက်သာသလဲဆိုတာလေးပါ။
taumif;qHk;uawmh tGefvdkif;uae tJ'D&uf aps;udk 0ifMunhf... NyD;&if at;*sifhudk zkef;qufar;... aps;oufomwm 0,fvdkufaygh... 20 30 avmufyJ uGm&ifawmh yefeDplvmu at;*sifhrSm 0,fwm ydkaumif;r,f... &ufav; bmav; ajymif;csif&if tqifajywmaygh...
လိုက်ကြဦးမလားဗျို့။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော် ကန်ပနီပေါင်း ၄၀၀ ကျော် ကနေပြီး ပစ်စည်းအမျိုးမည်ပေါင်း ၁ သောင်းကျော်လောက်လာပြမှာပါ။ တချို့ကန်ပနီတွေက ဈေးကွက်လာရှာတဲ့သဘောပါ။ ကျနော်တော ဒီပွဲသွားကြည့်ပါမယ်၊ မြန်မာဈေးကွက်ကို လှမ်းကြည့်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ သိပ်အသုံးဝင်တာမို့သွားသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
odyfvdkufcsifyghAsm... cufwmu &Hk;zGifh&ufcsnf;yJ... zGwf... t&if jrefrmjynfu tvkyfydkif&Sifu yk*vdu aq;cef;awGtjyif aq;&HkoHk;ypnf;awGyg oGif;awmh odyfpdwf0ifpm;wmayghAsm... vkyfcsifudkifcsif&if ukrfyPDBuD; zGifhp&mrvdkbl; vdkwmav;awG pm&if;aumufNyD; vdkufoGif;vdkU jzpfoaygh...
tm;usatmif ajym&&ifjzifh... tJ'D oaX;u ckawmh odef;axmifaomif;csDNyD;csrf;omaeygNyDav... ol aq;&HkoHk;ypnf;udkpawmh olu q&m0ef... puFmyludkvmNyD; [dk[dk 'D'D avhvmwm... tJ'DrSm a[mifaumifabhpf aq;ukrfyPDwpfcku ta&mif;orm;eJU rdwfzGJUrdNyD; [dku olUudk uGefwdefem wpfvHk; taMuG;eJU a&mif;ay;vdkufwm... oluvJ q&m0ef qdkawmh olU q&mBuD;awG tqufeJU aq;&HkawGrSm jzefUvdkufwm tdkauoGm;NyD; ckawmh jrefrmjynfrSm EdkifiHjcm; tajcpdkuf aq;ypnf;ukrfyPDawGeJU tjydKifayghAsm... udkvif;a& tm;ay;oAsdKU... tultnDvdk&ifajymaemf...
a[maumifb&ef;u pvdkufwm... ckqdk w&kwfb&ef; ukd&D;,m; *smrPD *syefxkwf b&ef;awGyg udk,fpm;vS,f,lNyD; uGefaumf'D;,m;wdkUeJU tjydKifusJaeoaygh...
2323, Ares, badinf, blooddiamond6, botherband, ChanGyi, Chit.tat.lun.tu, complicatedcool, GwanSein, Incubuz, jim beam, ka hta ma, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, Lynn Eainthu, ManawHary, MATRIX, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, mrlynn, phyo77, pieces, Ravan, RunAtServer, shadow69, talkyboy, vessel65, yokesoe, ZuKa
09-11-2012 02:57 AM #2
ဟုတ်တယ်ဗျို့ တကယ်စလုပ်ပြီဆိုတော့ ကန်ပနီကြီးတစ်ခုအဖြစ်လုပ်စရာမလိုအပ်သေးဘူးထင်တာဘဲဗျာ ။ ဘာလို့ဆိုတော့ စရိတ်ကြီးတာကို။ ဒါကြောင့် Supplier အနေနဲ့စတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်။ battery pack for all source of Bio Medical devices and equpments, Patient bed spare part, All source of pump such as infusion pump စသဖြစ် အသေးလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ခုလည်း X-Ray Film သွားရှာမှာ။ တရုတ် ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်၊ ယူရုပ် ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်။ အမြင့်တစ်မျိုး ၊ သာမန်တစ်မျိုး စသဖြင့်ပေါ့။ ရန်ကုန်က ကျနော့ပါတနာကလည်း ဆရာဝန်ဘဲ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ အကြွေးပေးမယ့်သူမတွေ့သေးဘူး။
ကန်ပနီပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ဆိုတော့ တစ်နေ့တည်းနဲ့အပြီးဖြတ်ဖို့မလွယ်သလို အကုန်လုံးလည်းလိုက်ကြည့်နိုင်မယ်မထင်ဘူး၊ ဒီတော့ ကိုယ် ရှာနေတဲ့ ပစ်စည်းရောင်းတဲ့ ကန်ပနီကိုဘဲ တိုက်ရိုက်သွားကြည့်ရမယ်နဲ့တူတယ်။ ၂၀၁၀ ကတစ်ခါလုပ်တာတော့ သိတယ်၊ ခု ၂၀၁၂ ပေါ့။ ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာမှ ရွေးလုပ်တယ်ထင်တာဘဲ။ ပြပွဲအတွက် အွန်လိုင်း Registration တော့မရတော့ဘူး ဒါပေမယ့် ဖွင့်ပွဲရက်တွေမှာတော့ အသင့်တွေ့ရတဲ့ ဧည့်ကြိုကောင်တာမှာ လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ဝင်ကြေး အခမဲ့လို့ပြောပါတယ်။
2323, Ares, badinf, botherband, Chit.tat.lun.tu, GwanSein, Incubuz, jim beam, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, Lynn Eainthu, ManawHary, MATRIX, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, RunAtServer, shadow69, solidsnake, talkyboy, THIHA, yokesoe
09-18-2012 05:25 AM #3
ဒီနေ့မနက် စင်ကာပူသတင်းစာတွေထဲမှာ ပါတဲ့ မြန်မာသတင်းတွေအကြောင်း အတိုပြောရရင်
ဒေသတွင်းနာမည်ကြီး Parkson Departmental Store ရှေ့နှစ် ၂၀၁၃ မှာ မြန်မာပြည်လာပြီး ဖွင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စဖွင့်မှာဖြစ်ပြီး လူလတ်တန်းစား နှင့် ငွေကြေးအားဖြင့် အသုံးများနိုင်တဲ့ အထက်တန်းလွှာတွေအတွက်အဓိကထားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာဈေးကွက်အတွက် အားစမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်းဘက်က မျှော်လင့်ပါကြောင်းတဲ့ခင်ဗျာ။
နောက်သတင်းတစ်ခုက မန်းလေး လေဆိပ် တိုချဲ့တည်ဆောက်ရေးအတွက် မြန်မာ့လေကြောင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ရှာဖွေ လိုလားလျှက်ရှိပါတယ်တဲ့။ မန်းလေး လေဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ကုန်စီပို့ဆောင်စီးဆင်းရေးလုပ်မယ့် နေရာအဖြစ်သာမက ဒေသတွင်းမှာပါ အရေးပါတဲ့ လေဆိပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်တဲ့။ လက်ရှိ မန်းလေး နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရဲ့ နေ့စဉ် ဝင်ထွက်လည်ပတ်မှုကတော့ဖြင့် အားရစရာမရှိပါ။
ဒီလို မန်းလေးလေဆိပ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်မှုသတင်းဟာ သတင်းကောင်းတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ပနီကောင်းရပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သတိထားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ လေဆိပ်အနီးနားက မြေဈေးတွေ မာ သွားမယ့်သဘောရှိပါတယ်။ ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တည်ဆောက်မှုပရောဂျစ်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ကဘဲ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန်ပနီပေါင်း ၃၀ ကျော် proposal တွေတင်ခဲ့ကြပါသတဲ့။ အမေရိကန် ကန်ပနီ၊ ဂျပန်ကန်ပနီ နှင့် စင်ကာပူနိုင်က ကန်ပနီများပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ ကန်ပနီတစ်ခုလည်း အပါဝင်ပါဘဲတဲ့ခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံး သတင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတယ်လို့တော့ မထင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကာဒ်အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေ စပြီးလုပ်နိုင်တော့မယ် ဆိုပြီး တခုတ်တရ ထည့်ရေးတဲ့သတင်းပါဘဲ။ လောလောဆယ်အမြင်အရပြောရရင်တော့ နိုင်ငံတကာမှာအသုံးများနေတဲ့ Visa, Master , AE ကာဒ်တွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အခက်အခဲမရှိ ဝန်ဆောင်ခ သက်သက်သာသာနဲ့ သုံးခွင့် ရတယ်ဆိုရင်ဘဲတော်လှပြီလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
2323, badinf, Chit.tat.lun.tu, dooky, Grace, GwanSein, hellocatcat, jim beam, khanhlaing, kokokhantchaw, LU SHAY, Lynn Eainthu, maykyalzin, mg pyin, mgknow, MNO.BN, murphy, Oscar Htun, pieces, Ravan, RunAtServer, Salone, shadow69, silvia, solidsnake, THARGYII, THIHA, ThunderHawk, vodafone, Xabia, Yamarmoto, yokesoe, ZuKa
09-18-2012 07:56 AM #4
Thanked 59,206 Times in 3,404 Posts
ဒေသတွင်းနာမည်ကြီး Parkson Departmental Store ရှေ့နှစ် ၂၀၁၃ မှာ မြန်မာပြည်လာပြီး ဖွင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စဖွင့်မှာဖြစ်ပြီး လူလတ်တန်းစား နှင့် ငွေကြေးအားဖြင့် အသုံးများနိုင်တဲ့ အထက်တန်းလွှာတွေအတွက်အဓိကထားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာဈေးကွက်အတွက် အားစမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်းဘက်က မျှော်လင့်ပါကြောင်းတဲ့ခင်ဗျာ။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ဘေးက FMI ကို Parkson အတွက် ပြင်ဆင်နေပါကြောင်း..
Chit.tat.lun.tu, jim beam, LU SHAY, Lynn Eainthu, mg pyin, mgknow, MNO.BN, mrlynn, phyo77, pieces, Ravan, RunAtServer, Salone, shadow69, silvia, THARGYII, tiptop, Yamarmoto, yokesoe
09-24-2012 03:56 AM #5
Junior Cupid I Love My Country
Thanked 2,440 Times in 173 Posts
Just found out on facebook
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါရစေဆိုပြီး လာ အကူအညီတောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ရင် အားနာမနေဘဲ ငြင်းလိုက်တာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက် အားနာပြီး လမ်းကြုံ သယ်သွားပေးမိတာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သူက လက်ဖက်တွေ၊ ငပိကြော်တွေလို့ ပြောပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပေမယ့် စင်ကာပူလေဆိပ်ရောက်လို့ စစ်တော့မှ ဆေးရွက်ကြီးတွေ ၀ှက်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်တာ သွားမိပါတယ်။
မြန်မာဘက်က ဆေးရွက်ကြီးသယ်သွားတာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပေမယ့် စင်ကာပူမှာကျတော့ ဆေးရွက်ကြီး သယ်လာတာဟာ သေလောက်အောင် ပြဿနာကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော့အသိလည်း လေဆိပ်မှာတင် ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ချက်ချင်း လက်ထိပ်ခတ်ခံရပြီး ရဲစခန်းရောက်သွားပါတယ်။ သူက ဟိုမှာ ၁၅ နှစ်လောက် အနေကြာလာပြီး၊ ဟိုမှာလည်း ပတ်ပတ်နပ်နပ် လိုက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာတွေရယ်၊ သူ့ကုမ္ပဏီရယ် ရှိနေလို့သာ ဂျေးထဲ မရောက်ခင်လေး လက်မတင်လေး ပြန်ထွက်လာနိုင်တာပါ။
စင်ကာပူအထာလည်း မသိ၊ စင်ကာပူနဲ့လည်း စိမ်းသေးတဲ့ လူသစ်လေးတွေ အဲ့လိုများ ခံလိုက်ရရင် ဘ၀ပါ ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။
လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါရစေဆိုလို့ ကိုယ်က စေတနာနဲ့ သယ်သွားပေးတာဆိုပေမယ့် အထဲမှာ ဆေးရွက်ကြီးလိုဟာတွေ ၀ှက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ တိုးရင် ကိုယ်က စင်ကာပူကို ဆေးရွက်ကြီး တရားမ၀င် တင်သွင်းမှုနဲ့ သေလောက်အောင် ပြဿနာတက်မယ်၊ ထောင်ပါ ကျနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြပါ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ အဲ့လို လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါရစေဆိုပြီး လုပ်စားနေတဲ့ ရုပ်ရည်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သားသားနားနား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့လည်း ကျွန်တော့ အသိက ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်က သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများအဆုံး ထိုအမျိုးသမီးကို သိကြတယ်လို့လည်း ကျွန်တော့အသိက ဆိုပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း အဲ့အမျိုးသမီးကပဲ အကူအညီတောင်းပြီး ထည့်ပေးလိုက်ရာက ပြဿနာဖြစ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခုထိလည်း အဲ့လို လုပ်နေတုန်းပါပဲ။
ထိုအမျိုးသမီးကို ရဲစခန်းမှာ တိုင်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ ဆေးရွက်ကြီးထည့်ပေးလိုက်တာကို တရားမ၀င်လုပ်ရပ်အဖြစ် အရေးယူလို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူသွားမယ့်လူများကသာ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး ရှောင်ရှားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ဘက်မှာက ဆေးရွက်ကြီးဟာ တရားမ၀င်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ဘယ်လိုမှ အရေးယူလို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ သူ ခိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီးက လွတ်သွားပြီး ဟိုဘက်မှာ သူနဲ့ ချိတ်ဆက် လာစောင့်တဲ့လူလက်ထဲ ရောက်သွားရင် စင်ကာပူမှာ ဆေးရွက်ကြီးဟာ မှောင်ခိုဈေး အတော်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
စင်ကာပူ သွားမယ့် လူဟောင်းတွေရော၊ လူသစ်တွေရော သတိထားပါ။ ကျွန်တော့ အသိအပါအ၀င် အခြားသော မြန်မာတွေလည်း အဲ့လို လူကြုံထည့်ပေးပါရစေဆိုတာတွေထဲမှာ ဆေးရွက်ကြီးတွေပါလာလို့ စင်ကာပူလေဆိပ်မှာ ဒုက္ခရောက်ကုန်တာ မနည်းဘူးလို့ သိရပါတယ်။
AungDin, badinf, blooom, Chit.tat.lun.tu, GwanSein, Incubuz, jsn_woo, kokokhantchaw, kokoye, lovecupid, Lynn Eainthu, maykyalzin, mg pyin, mgknow, MNO.BN, Nenemosha, petit, Ravan, RunAtServer, shadow69, silvia, solidsnake, SuperPooh, suuchit, systemVI, tagumay, totekyi, wasabi, yokesoe, ywathitgyi, ZuKa
12-15-2012 03:54 AM #6
pvHk;u 'DaeYxkwf The Straits Times owif;pm&JU rsufESmzHk;yg/
badinf, barronbala, blooom, Chit.tat.lun.tu, Incubuz, jim beam, KaungKinPyar, kohtwe, Lynn Eainthu, maykyalzin, MNO.BN, mrlynn, Thura Soe, turtle81, yokesoe
12-15-2012 04:26 AM #7
8th Myanmar Business Conference 2013
puFmylrSm a&mufaewJh olyJ jzpfjzpf ukd,fawG&JU abmpdawGyJjzpfjzpf jrefrmEkdifiHrSm pD;yGm;a&;vkyfcsif&if &if;ESD;jrSKyfESHrSKtaMumif;awG odcsifwmawG od&atmif atmufu conference av; puFmylrSm vkyfzkdY&SdaMumif;ygcifAsm/
22nd & 23rd January 2013, Orchard Hotel, Singapore
Myanmar Business Opportunities Update - Hear from Officials
The 8th Myanmar Business Conference 2013 will be held in Singapore on January 22 & 23, 2013 with the objectives:
1) To create awareness and update on latest Government's policies, labour & taxation laws, rules & regulations in starting and doing business in Myanmar,
2) To create awareness on promoted industries and full discussion on the NEW Foreign Investment Law,
3) Updating investors who are in the Manufacturing, Construction, Banking & Finance, Property Development, Logistics, etc of the latest opportunities. Myanmar businessmen will also attend this conference to seek out business partners for expansion of their business operations in Myanmar.
4) Networking with Government Officials and be briefed and updated of the latest changes to the laws providing incentives and opportunities to investors.
source : http://myanmarbusinessconference.com...onference.html
achitsone, badinf, barronbala, blooom, Chit.tat.lun.tu, Deadmanwalking, garfield, Incubuz, KaungKinPyar, kohtwe, KoSai11, MNO.BN, ngatetpyar, solidsnake, yokesoe
12-15-2012 02:40 PM #8
The windiest city in the world
Thanked 682 Times in 127 Posts
May i know what the URL of our beloved Embassy of Myanmar in sg to get the Q number for passport extension and pay tax? thanks in advance.
Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, MNO.BN
12-15-2012 03:01 PM #9
Thanked 10,235 Times in 911 Posts
Google rSm Myanmar Embassy in Singapore vdkU ½Smvdkuf&ifudk tay:qHk;rSm atmufuvifhcfudk awGUygvdrfhr,fcifAs/
Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, Lynn Eainthu, MNO.BN, turtle81
12-15-2012 03:21 PM #10